Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Android ဖုန်း ကိုင်ဆောင်ထားသူတိုင်း (မဖြစ်မနေ) ထည့်သွင်းထားရမဲ့ AdClear ♫
♪ Android ဖုန်း ကိုင်ဆောင်ထားသူတိုင်း (မဖြစ်မနေ) ထည့်သွင်းထားရမဲ့ AdClear ♫
အင်တာနက်အသုံးပြုရင်း Ads လို့ခေါ်တဲ့ ကြော်ငြာတွေ တတ်တတ်လာတာမျိုး ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်... အခုနောက်ပိုင်း ကြော်ငြာတွေကတဆင့် Virus ဝင်တဲ့ဖုန်းတွေ တော်တော်များလာတာတွေ့ရပါတယ်... Factory Reset ချပေးရုံနှင့် အဆင်မပြေတော့ပါဘူး.. Firmware ပြန်တင်တာတောင်မှ တချို့ဖုန်းတွေမှာဘယ်လိုမှထုတ်ပစ်လို့မရတတ်ပါဘူး။
Ads ကြော်ငြာတွေက တော်တော် ဒုက္ခပေးပါတယ်။
ဒီ Application လေး ထည့်ထားရုံမျှဖြင့် Ads Virus အန္တရာယ်များမှ ကင်းဝေးစေခြင်း၊ Data အစားသက်သာစေခြင်း၊ Battery အစားသက်သာစေခြင်း၊ အင်တာနက် Speed ကို မြန်ဆန်စေခြင်း စ,တဲ့ အားသာချက်တွေကို တပြိုင်တည်း ရရှိစေမှာပါ..။
ဒါ့ကြောင့် Android ဖုန်းတိုင်းမှာ ထည့်ထားကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါရစေခင်မျ. :)
AdClear Apk ကို ဒေါင်းယူ Install လုပ်ကာ Power လေးကို On ပေးထားလိုက်ရုံပါပဲ။
မှတ်ချက်။ ။ Root ဖေါက်ထားရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ Rooted ဖုန်းတွေမှာရော Non-Root ဖုန်းတွေမှာပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အသုံးဝင်ပုံနဲ့ အသုံးပြုပုံကို အောက်က Video မှာ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်..။
ဒီနေရာမှ Antivirus တစ်ခုခုကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသင့်ပါသေးတယ်။